लभ डायरिज छठमा खुल्ने बिहिवार, भदौ २६, २०७६
‘म बेड सिन दिन तयार छु’: साम्राज्ञी सोमवार, भदौ २३, २०७६
‘मारुनी’ देशभर रिलिज शुक्रवार, भदौ १३, २०७६
यसपटकको तिज ‘मारुनी’सगै चलचित्र ‘मारूनी’ टिम नेपालगन्जमा आएकोछ । चलचित्रको प्रचार–प्रसारका लागि देश दौडाहमा रहेको मारूनी टिम आईतबार नेपालगन्ज आइपुगेको हो । सोमवार, भदौ ९, २०७६
नेपालगन्जमा ‘मारुनी‘को कन्सर्ट आज यतिखेर चलचित्र ‘मारूनी’ टिम मोफसलमा छ । चलचित्रको प्रचार प्रसारका लागि मारूनी टिम मोफसल पुगेको हो । आइतवार, भदौ ८, २०७६
निर्देशक किशोर रानाको निधन मिर्गौला पीडित चलचित्र निर्देशक किशोर रानाको निधन भएको छ । लामो समयदेखि मिर्गौला रोगबाट पीडित रानाको ५४ वर्षको उमेरमा बुधबार ललितपुरको निदान अस्पतालमा निधन भएको हो । बुधवार, भदौ ४, २०७६
सन्नि लियोनी नेपाल आउँदै बलिउड अभिनेत्री तथा आइटम गर्ल सन्नि लियोनी नेपाल आउने भएकी छिन् । बुधवार, भदौ ४, २०७६
काठमाडौंमा समलिंगीहरुको परेड गाईजात्राका अवसरमा समलिङ्गीहरूले परेड निकालेका छन् । एक वर्षयता मृत्यु भएका समलिङ्गीहरूको सम्झना गर्दै उनीहरूले काठमाण्डौंमा परेड निकालेका हुन् । शनिवार, श्रावण ३२, २०७६
अक्षयको ‘मिसन मंगल’ ले राख्यो रेकर्ड बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘मिसन मंगल’ उनको करिअरको सबैभन्दा धेरै ओपनिङ गर्ने फिल्म बनेको छ । भारतीय मिडियाका अनुसार यो फिल्मले पहिलो दिन २९ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको कमाइ गरेको छ । शनिवार, श्रावण ३२, २०७६
क्रिष्टिनाले कमाल गर्लिन् त ? क्रिष्टिना गुरुङ ‘प्रेम गीत ३’ मा नायिकाका रुपमा छनोट भएपछि यतिबेला उनको खुबै चर्चा छ । यस वर्षको प्रतीक्षित फिल्म ‘प्रेम गीत ३’ मा उनी अभिनेता प्रदीप खड्कासँग रोमान्स गर्दैछिन् । शनिवार, श्रावण ३२, २०७६
नीताको चर्चा किन हुन छोड्यो ? पछिल्लो समय भने नीताको चर्चा झण्डै शून्यजस्तै छ । त्यसो त नीता खासै फण्डा गर्न नजान्ने नायिका पनि हुन् । नेपाली फिल्म उद्योगमा भने जसले फण्डा गर्न जानेको छ, उही अगाडि आउने गर्छ । शनिवार, श्रावण ३२, २०७६
वरिष्ठ कलाकार सुभद्रा अधिकारीको निधन, पशुपति आर्यघाटमा अन्त्यष्टि गरिदै वरिष्ठ कलाकार सुभद्रा अधिकारीको ७३ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनको शनिबार बिहान ८ बजेतिर डल्लुस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । शनिवार, श्रावण ३२, २०७६
साउन १० गते ‘सुपर गोर्खे’ नायिका ऋचा सिंह ठकुरीको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘सुपर गोर्खे’को प्रदर्शन मिति तय गरिएको छ । हुनत, यो चलचित्रको प्रदर्शन मिति पहिलो पटक तय गरिएको होइन । चलचित्रको प्रदर्शन मिति बारम्बार तोक्दै पछि सारिएको थियो । अब, भने यो चलचित्र साउनको १० गतेबाट रिलिज हुने भएको छ । बुधवार, श्रावण १, २०७६
म्यूजिक कन्र्सटको तयारी पुरा नेपालागन्जमा आयोजना हुने म्युजिक कन्सर्टको तयारी पुरा भएकोछ । मिम्स इभेन्ट म्यानेजमेन्टले भोली शुक्रबार नेपालगन्जको सिद्धार्थ कटेजमा आयोजना गर्न लागेको म्युजिक कन्र्सटको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको जनाएकोछ । बिहिवार, असार १९, २०७६
एसईईमा ‘बी प्लस’ आएपछि करिश्मा खुशी नायिका करिश्मा मानन्धरले ‘एसईई परीक्षा’ मा ‘बी प्लस’ ग्रेड ल्याएकी छिन् । नायिका करिश्माले जीपीए ३ प्राप्त गरेकी हुन् । नायिका मानन्धरले एसईई परीक्षाको रिजल्टबाट आफू निकै खुशी भएको बताइन् । बिहिवार, असार १२, २०७६
पिरिमको बाढी सार्वजनिक ईन्जिनियर तथा गायक वीरेन्द्र श्रेष्ठको स्वरमा रहेको पिरिमको बाढी बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । बुधवार, जेठ २२, २०७६